ကလေး တွေ ကို မြေတိုက်ခန်း ထဲ မှ ဖမ်းဆီးထား တဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တွေ ကို အရေးယူမည် | Freedom News Group
ကလေး တွေ ကို မြေတိုက်ခန်း ထဲ မှ ဖမ်းဆီးထား တဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တွေ ကို အရေးယူမည်
by FNG on August 10, 2012	ရုရှား နိုင်ငံ ရှိ မွတ်ဆလင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် က မြေတိုက် ခန်း တွင် နှစ် ပေါင်း များ စွာ
ပိတ်လှောင် ခံထား ရသည့် ကလေး များ ကို ရုရှား အာဏာ ပိုင်များ က ပြန်လည် ကယ် တင် နိုင်
ခဲ့ ပြီ ဖြစ်သည်။
မြေတိုက် ခန်း ထဲ တွင် ပိတ်လှောင် ခံထား ရစဉ် ကလေးများ မှာ နေရောင် ကို လုံးဝ မြင်ရ ခြင်း မရှိဘဲ
ချမ်းအေးသည့် ရာသီ များ တွင် အပူပေး စက် များ ဖွင့် လှစ် ပေး ခဲ့ ခြင်း မရှိ ဟု CNN သတင်း
တွင် ဖော် ပြ ထား သည်။
ပိတ်လှောင် ခြင်းခံထား ရသူများ ကို ပြန်လည် ကယ် တင် ရာ တွင် ကလေးများ နှင့် အရွယ် ရောက်
ပြီး သူများ မှာ ကျန်းမာ ရေး ကောင်း မွန် သော်လည်း ၊ ညစ်ပတ် နံစော် လျှက် ရှိသည် ဟု ရုရှား ကယ် ဆေး ရေး အဖွဲ့များ က ဆိုသည်။ ကလေးများ ကို ဖမ်းဆီးထားသည့် တာတာစတန် ဒေသမှ မွတ်ဆလင် ဗလီ
ဖမ်းဆီး ခံထားရသူများ တွင် ၂၇ ဦး မှာ ၁၈ နှစ် အောက် ကလေးများ ဖြစ် ပြီး ၃၈ ဦးမှာ အရွယ် ရောက် ပြီး သူများ ဖြစ်ကြ သည်။ ကယ် ဆယ် နိုင်ခဲ့ သည့် ကလေး များ တွင် အသက် ၁ နှစ်မှ
၁၈ နှစ် အရွယ် ထိ ပါ ၀င် ပြီး အချို့ မှာ ထို မြေအောက် ဘန်ကာ ထဲ တွင် ပင် မွေးဖွား ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်
ရုရှား နိုင်ငံ မှ အယ်(လ)ဂျာဇီးယား သတင်း ထောက် မယ်လီဆာ ချန်း ၏ သတင်း ပေး ပို့မှု တစ်
ခုတွင် တမန်တော် နှင့် အဆက် အသွယ် ရှိသည် ဆို သည့် အသက် ၈၃ နှစ် အရွယ် မွတ်ဆလင်
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် ဖိုင်ဆရာ ခါမန်း ဆာတာရောဗ် က ထို မြေအောက် ဗလီ နန်းတော် ရှိ
သည့် နေရာ သည် အစ္စလာမ် လွတ်မြောက် နယ် မြေဖြစ် ၍ ရုရှား အစိုး ရ နှင့် မသက် ဆိုင် ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းသည် ရုရှား နိုင်ငံ ၏ ဥပဒေ များ ကို လည်း ဂရု မစိုက် ဟု ဆိုသည်။
သုံးထပ် အဆောက် အဦ ၏ မြေအောက် ရှစ်ထပ် မြောက် တွင် ဖမ်းဆီး ခံ ထား ရသူ များ အလယ်
အလတ် ကျသည့် တာတာစတန် ဒေသမှ မွတ် ဆလင် ဘာသာ ၀င် များ ဖြစ်သည်။ ဒါဇင် နှင့် ချီသည့် ကလေး များ ကို ဖမ်းဆီးထား သည့် ရုရှား လှို့ ဝှက် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး
ဂိုဏ်းခေါင်း ဆောင် များ ကို ကလေး သူ ငယ် ဖိနှိပ် ညှင်းပန်း နှိပ် စက် မှု ဖြင့် အရေးယူ မည်
ဖြစ်သည်။ ကလေးများ အား ဖမ်းဆီးထား သည့် မြေတိုက်ခန်း
Russian authorities find sect members living underground (cnn.com)
Islamic sect living underground for nearlyadecade found in Russia (vancouversun.com)
Russian underground sect: children were dirty but fed (telegraph.co.uk)
Underground Islamist Sect Discovered In Tatarstan (wibw.com)
Tags: Bunker, CNN, Islam, Kazan, Moscow, Russia, Sect, Tatarstan	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← သခင် ရဲ့ရင်ခွင် ထဲ တွင် မှေးအိပ် နေသည့် ကယ်ဆယ်ရေး ခွေး ဓာတ်ပုံ Facebook တွင် ကျော်ကြားနေ
မြန်မာ တွေ ကမ္ဘာ လည့် ခရီးသွား တော့ မယ် →
kill to these muslim guys.
they are killer and they doing cannot
grow human life.they want
the humans life are change
to musilm they need the hole world.
and they want to fight American.
so anywhere any place
muslim people have borned many children.
very rude and they are lier.
hate them other people of theworld.
August 13, 2012	့honey	#
this is very rude .world wide they know very well isalam some peoples are
August 12, 2012	aungparsay	#
August 11, 2012	aungparsay	#
August 11, 2012	Mara	#
ဗမာတွေ အိုင်ဒီယာ ပြောင်းလဲခြင်း..ဟဲဟဲ.. အားလုံးသော မွတ်ဆလင်တွေကို ကုလားခေါ်တောခြင်း ။။ ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာရဲ အကျိုးကျေးဇူး…. ဟဟဟဟဟ Eleven website ကလေ… ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကြိုက်သလို ဆဲလို့ရတဲ့ web….
August 11, 2012	bago	#
အခြေမြစ်မရှိတဲ့ ဘာသာနဲ့ ဦးနှောက်မရှိတဲံ့ ခွေးကုလားတွေ ဘာသိမှာလဲ သူတို့ ဘာသာမှာလူဦးရေတိုးရင်ပြီးရောဆိုပြီးလုပ်နေတာနေမှာပေါ့ဗျာ ပြီးတော့လဲ အဲဒီအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဘာသာထဲကိုဝင်ရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး မဝင်ရင်တော့ လည်လှီးခံရမှာတော့အမှန်ပဲဗျာ……
August 11, 2012	same	#
ဗလီဆို တာနာမည်ခံပါ။သူတို့ရဲ့ ယုတ်မာတဲ့အကြံတွေ ကို ဗလီ ထဲ မှာ စုဝေးတိုင်ပင်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံထဲ က ဗလီတွေ ကိုလဲ စစ်ဆေးသင့်တယ်။
August 11, 2012	Argar	#
ကမ္ဘာအယုတ်ဆုံး လူစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ တရိစ္ဆာန်ထက်အဆင့်နိမ့်တဲ့ ကုလားယုတ်တွေ
August 11, 2012	thu daw wait zarr	#
pls kill this stupid islum old dirty fat and oily guy for this child.to save the world of islum war.
August 11, 2012	ngapauk	#
August 11, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,559,357 hits
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar releases 41 political prisonersMyanmar's surreal capital now less ofaghost townMyanmar frees 44 political prisonersSEA Games: Myanmar hosts international coming-out partymyanmar-sea-games-opening-ceremony-reuters-121213.JPGMyanmar releases 44 prisoners of conscienceICRC advising police in MyanmarMyanmar's President Pardons Political PrisonersWant Burma info in your inbox each morning?